Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » Cabsida COVID-19 Noocyada Dayrta
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Cabsida COVID-19 Noocyada
Machadka Sare ee Caafimaadka (HIH) ee ku yaal dalka Talyaaniga ayaa qeylo dhaan ka muujinaya halka tirada dadka la seexinayo ay weli hooseyso. Boqolkiiba kiisaska togan ayaa keenaya cabsi ah noocyada kala duwan ee COVID-19 ee kala ah Kappa iyo Delta, inta badan tan dambe, oo ka kacday 5.2 boqolkiiba bishii Meey illaa 27.7 boqolkiiba Juun.
Warbixin cusub oo ka socota HIH oo ku saabsan faafitaanka noocyada kala duwan waxay ku baaqeysaa "fiiro gaar ah" in loo fidiyo wareegga noocyadan kala duwan ee faafa.
Tallaal saddexaad ayaa la soo jeedinayaa si loola dagaallamo noocyadan kala duwan ee COVID-19.
Bisha Oktoobar, waxaa dib u soo kici doona wareegga fayraska, oo ka duwan sanadka 2020, inta badanna kuwa aan la tallaalin waxay ku dambayn doonaan daryeel degdeg ah.
"Qiyaasta seddexaad ee tallaalka waxay ku jirtaa soo jeedimaha, laakiin ma ogin goorta iyo cidda," ayuu yiri Agaasimaha Guud ee Ka-hortagga ee Wasaaradda Caafimaadka ee Talyaaniga, Gianni Rezza.
Tallaalka saddexaad ee COVID-19 ayaa daraasad lagu wadaa, xitaa haddii aynaan weli garanaynin goorta, sida, iyo cidda loo samaynayo, ”ayay Rezza ku sharraxday intii lagu jiray shir jaraa'id oo ay ku falanqaynaysay xogta ku saabsan kormeerka gobolka ee COVID-19.
"Bisha Oktoobar, waxaa dib u soo laaban doona wareegga fayraska, oo ka duwan kan 2020, inta badanna kuwa aan la tallaalin waxay ku dambayn doonaan daryeel adag," ayuu yiri xoghayaha caafimaadka, Pierpaolo Sileri. Khatartu waxay tahay in fayrasku ku dhex faafo carruurta aan la tallaalin iyo kuwa ka weyn 60, iyadoo kan dambe uu halis ugu jiro inuu ku dhammaado daryeelka degdegga ah. Weli waxaan u dhimanayaa coronavirus oo tallaal leh aniga doqon bay ila tahay. Waxaan heysanaa hub aan iskaga ilaalino dhimashadii sanadkii hore uusan laheyn. ”
Delta Variant: Waxyaabaha ay tahay in la ogaado
Kala duwanaanshaha Delta, oo leh culeyska fayraska 60 boqolkiiba faafa marka loo eego noocyada kale ee fayraska, ayaa sidoo kale ku sii kordhaya Talyaaniga sida ku cad xogta ay soo saartay Wasaaradda Caafimaadka iyo Machadka Caafimaadka ee Sare ee kormeerka toddobaadlaha ah.